Qorshaha Xaaf Oo Laga Digay - Awdinle Online
Qorshaha Xaaf Oo Laga Digay
January 6, 2020 (Awdinle Online) –Qaar ka mid ah Siyaasiyiinta iyo Waxgaradka ka soo jeeda Galmudug ayaa madaxweynaha maamulkaas Axmed Ducaale Geelle Xaaf ku eedeeyay inuu carqaladeynayo dhismaha maamulka Galmudug iyo habsame u socodkiisa.
Siyaasiyiinta ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan waxa ku soo beegay hadalka Xaaf ka soo yeeray ay tahay mid laga soo shaqeeyay,islamarkaana lagu doonayo in lagu fashiliyo in maamul loo dhan yahay loo sameeyo Shacabka Galmudug.
Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeyay wax laga weydiinayo Galmudug iyo qorshaha dhismaha maamulka ee socda,wuxuuna Dowladda Federaalka ku eedeeyay iney faragelin ku heyso Maamulka Galmudug.
Xaaf ayaa hadda u jooga magaalada Gaalkacyo qorshe uu ku doonayo inuu ku fashiliyo maamul Galmudug,wuxuuna shir jiraa’id uu dhawaan qabtay ku sheegay in waxa ka socda magaalada Dhuusamareeb loo dhammeyn loona baahan yahay in laga tashto.
Wuxuuna magacaabay guddi ka shaqeeya doorashada Galmudug oo aan ahayn guddiga fadhiya magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah maamulka Galmudug.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa magaalada Dhuusamareeb ka wada kulamo lagu xalinayo tabashada ay qabaan beelaha qaar oo saluugsan hannaanka uu u socdo dhismaha maamulka Galmudug.
Previous articleDF Oo Qorsheneysa Inay Soo Hormariso Doorashada Madaxweynaha HirShabelle
Next articleCiidamada Turkiga oo ku sii socda Libiya